Ny Xiaomi Mi Max 2 dia ho ofisialy amin'ny 25 May | Vaovao momba ny gadget
Ny Xiaomi Mi Max 2 dia ho ofisialy amin'ny 25 May
El Xiaomi MiMax Izy io dia iray amin'ireo fitaovana finday nahagaga indrindra tamin'ny 2016, ary izy no voalohany, tamin'ny maro hafa izay tonga taty aoriana, nandefa efijery lehibe mihoatra ny 6 santimetatra, indrindra ny 6.44 santimetatra. Ny fahombiazana dia toy ny hoe na dia ho terminal tsy misy fantsona voafetra ho an'i Shina fotsiny aza izy io tamin'ny farany dia lasa iray amin'ireo finday avo lenta indrindra io, ary nanasarotra ny fiainana ny mpamokatra sinoa voatery nanamboatra singa maro hafa amin'ireo omena.
Ankehitriny Xiaomi dia nanambara ny fanolorana ofisialy ny Xiaomi Mi Max 2 vaovao amin'ny 25 mey ho avy izao izay efa nampientanentana be indrindra teo amin'ny tambajotra sosialy.
Ny phablet vaovao dia hanaraka ny tsipika natombok'i Mi Max tany am-boalohany, mametraka efijery 6.44-inch, na dia toy ny tamin'ny tranga teo aloha aza nefa tsy terminal ho an'ny antsoina hoe avo lenta satria hahita mpikirakira isika Snapdragon 626 na 660, tohanan'ny RAM 4 na 6 GB.
Ireo fampahalalana rehetra ireo dia avy amin'ny tsaho isan-karazany izay mandeha amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny alàlan'ny tambajotram-pifandraisana, izay miteny ihany koa fa ity fitaovana vaovao ity dia mety ho hita eo amin'ny tsena miaraka amin'ny vidiny eo anelanelan'ny 1.499 sy 1.699 yuan na inona no mitovy hanovana 195 hatramin'ny 220 euro.
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miandry isika, andro vitsivitsy monja, hihaonana amin'ny fomba ofisialy ny Xiaomi Mi Max 2 vaovao izay nantsoina ho iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra amin'ny taona ho avy, ary tsy noho ny efijery goavambe fotsiny ihany, fa koa noho ny maro hafa ny mampiavaka azy, izay mazava ho azy ny vidiny ambany.
Heverinao ve fa hamerina ny fahombiazana ilay Xiaomi Mi Max 2 vaovao?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny Xiaomi Mi Max 2 dia ho ofisialy amin'ny 25 May
Mbola milalao Pokémon GO ve ianao? Ny fanavaozana manaraka dia hanampy ny Pokémon Legendary
Ny fihenam-bidy amin'ny magazay ao amin'ny PlayStation Store dia hiala aina